Njengamanje, ukuqubuka esiFundazweni saseHebei kudlulile futhi abantu sebebuyele empilweni ejwayelekile yansuku zonke. Kodwa-ke, ngenxa yomshuwalense, isifunda esithile sisadinga ukukhombisa isitifiketi sokuhlolwa esingesihle sezinsuku eziyi-7 noma sezinsuku eziyi-14 seCovid-19. Ifektri yethu iqale kabusha ukukhiqiza nomsebenzi ojwayelekile. Samukela eyakho ...
UNdunankulu uLi Keqiang ubengusihlalo womhlangano omkhulu woMkhandlu Wombuso ngo-Ephreli 7, ephendula isimo esibucayi salo bhubhane lomhlaba, umhlangano uthathe isinqumo sokuthi i-127th Canton Fair izobanjelwa ku-inthanethi maphakathi no-June. ICanton Fair ingenye yemibukiso yokuqala ukuba yindawo ...
1. Okokuqala Sicela usitshele igama lomkhiqizo noma uma ungenalo igama ungasithumela isithombe, noma ungabheka iwebhusayithi yethu ukuthola imikhiqizo oyidingayo. 2. Nikeza usayizi wemininingwane yemikhiqizo oyidingayo? Intambo ukushuba: igeji / ububanzi bocingo; iphakethe: isisindo, mangaki amakhilogremu ku-c eyodwa ...
Manje iCorona-virus isakazeka emhlabeni wonke. Muva nje sithola izindaba eziningi ezivela kumakhasimende ngesimo samazwe abo. Siyazi ukuthi abanye benu bakhathazekile ngaleli gciwane. Esikhathini esedlule, sizwe okufanayo njengoba uhlangabezana nakho manje. Sifuna ukwabelana ngolwazi oluthile nawe ...